Hot beautiful — Steemit
သူတို့နထေိုငျပုံကိုအားဖြင့်လူဦးရေ Organizing - မဟုတ်ဘဲသူတို့နေထိုင်ထက် - ကမ္ဘာ့အကြောင်းပြောဆိုရန်ပိုပြီးတိကျတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ (ကျနော်တကယ်တော့ငါ့ Gates ကမှတ်စုများပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ဤအဆင့်ဆင့်၏ရှင်းလင်းချက်ပါဝင်သည်။
ဒါဟာလည်းကျန်းမာရေးလုပ်သား, NGO များနှင့်အစိုးရများအားဖြင့်ညှိနှိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သူရဲကောင်းများအစားစနစ်များကိုရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌လက်ျာဘက်ဖြစ်ပျက်ရဲ့တိုးတက်မှုလက်လွတ်။ သငျသညျအရာတစ်ခုခုတိုးတက်စေလိုလျှင်ပိုကောင်းစနစ်များကိုတည်ဆောက်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေပါ။
ဤစာအုပ်ကိုတှငျအဘယျဆိုတဲ့အချက်ကိုအထူးသဖြင့်သင်ကအံ့အားသင့်? ပညာရှင် Hans ကမ္ဘာကြီးကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုအဆိုပါမူဘောင်ငါ့အဘို့ဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူလေးဝင်ငွေအဆင့်အတန်းအားဖြင့်လူတွေကို categorizes နှင့်တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းအပေါ်တည်ရှိသောဆင်တူရိုးမှားအလေးပေးဖော်ပြသည်။ သူတို့ $4တစ်ရက်မှ $2နေ့ကမှမိမိတို့ဝင်ငွေနှစ်ဆဥပမာ, လူတွေကသူတို့ကင်ရှာဆာသို့မဟုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့အတွက်ဝေးလံသောရွာ၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖြစ်စေ, ဖိနပ်များနှင့်စက်ဘီးကိုဝယ်လေ့ရှိပါတယ်။
) ဤစာအုပ်ထွက်လာကြနိုင်ခြင်းမပြုမီပညာရှင် Hans Rosling မနှစ်ကကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုနှင့်မည်သို့သူသည်သင်၏ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခဲ့ကြနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုရှိခဲ့သလဲ မိမိအထူးကဲကို TED ဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့်: Melinda နဲ့ကျွန်မပညာရှင် Hans လူအများစုလုပ်ခဲ့တယ်တူညီသောလမ်းသူသင်ယူခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်ညစာကျော်ရယ်မောကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တန်းတူအတိုင်းအတာ၌အကြှနျုပျတို့၏အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့မဟာဗျူဟာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပညာတရားကိုပူဇော်နိုင်သူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြံပေးအဖြစ်သူ့ကိုမသိရသို့ရောက်ကြ၏။ အစဉ်မပြတ်ငါသူဖျော်ဖြေရေးနှင့်အတူပစ္စည်းဥစ္စာများကိုဟန်ချက်မျှအောင်စီမံခန့်ခွဲပုံကိုလေးစားပါတယ်။ ပညာရှင် Hans သူ (စာသား) မိမိသတင်းစကားကိုစိတ်ဝင်စားသောလူစောင့်ရှောက်ဖို့တချို့ဓားကိုမျို, ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့အလုပ်အကြောင်းပြောဆိုရန်ကိုပွငျဆငျအခါတိုင်းစိတ်ထဲမှာအတွက်စောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သိတယ်။ ဤစာအုပ်အဘို့သင့်မျှော်လင့်ချက် Rosling ရဲ့အမွေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ကဘာလဲ? ပညာရှင် Hans အမြဲဒေတာကောင်လေးဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများပေမယ့်သူကဤမျှလောက်ပိုပြီးထက်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့၏အဆုံးမှာပညာရှင် Hans သူသည်ကမ္ဘာ့အကြောင်းကိုသိတယ်အဘယ်အရာကိုအများစုတို့သည် လာ. ပြောပါတယ် "မဒေတာကိုလေ့လာရာမှ ... ဒါပေမယ့်အခြားလူများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်း။ " သူကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နက်ရှိုင်းသောနားလည်မှုနှင့် beyo သှားသောဇာတ်လမ်းပြောပြများအတွက် knack ခဲ့
little face of angel, lips to kiss .... beautiful, I hope to see you always here